Bible Mu Nsɛm Yesu Wusɔre Besi Paulo Afiasenna So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Yesu wu akyi da a ɛto so abiɛsa no, wonyan no. Saa da no oyii ne ho adi kyerɛɛ n’akyidifo mmere horow anum. Yesu kɔɔ so yii ne ho adi kyerɛɛ wɔn adaduanan. Afei, bere a na n’asuafo no binom rehwɛ no, Yesu foro kɔɔ soro. Dadu akyi no Onyankopɔn hwiee honhom kronkron guu Yesu akyidifo a na wɔretwɛn wɔ Yerusalem no so.
Akyiri yi, Onyankopɔn atamfo ma wɔkyekyeree asomafo no guu afiase, nanso ɔbɔfo bi koyii wɔn. Wɔn a wɔsɔre tia siw osuani Stefano abo kum no. Nanso yehu sɛnea Yesu paw wɔn a wɔsɔre tia no mu biako ma ɔbɛyɛɛ ne somfo titiriw, na ɔno na ɔbɛyɛɛ ɔsomafo Paulo. Afei Yesu wu akyi mfe abiɛsa ne fã no, Onyankopɔn somaa ɔsomafo Petro sɛ ɔnkɔka asɛm nkyerɛ Kornelio a na ɔnyɛ Yudani no ne ne fifo.
Bɛyɛ mfe 13 akyi no Paulo fii n’asɛnka akwantu a edi kan no ase. Timoteo bɛkaa Paulo ho wɔ n’akwantu a ɛto so abien no mu. Yehu sɛnea Paulo ne n’akwantu mu ahokafo no nyaa anigye wɔ Onyankopɔn som mu. Awiei no, wɔde Paulo kɔtoo afiase wɔ Roma. Mfe abien akyi no wogyaa no, nanso akyiri yi wɔde no kɔtoo afiase bio na wokum no. ƆFA 7 yi mu nsɛm no gyee bɛyɛ mfe 32.